Marisa Miller ဝတ်လစ်စလစ် & Topless Pics + Sexy မြင်ကွင်းများ - ကျော်ကြားသောရုပ်ရှင်မော်ကွန်းတိုက်
Marisa Miller ဝတ်လစ်စလစ် & Topless Pics + Sexy မြင်ကွင်းများ
မော်ဒယ်, မင်းသမီးနှင့်ကြယ်ပွင့် Marisa Miller ကအဝတ်အချည်းစည်းကြီးမားသော Boob, pussy, topless pics နှင့် 'RIPD' နှင့် 'Entourage' မှသူမ၏ sexy မြင်ကွင်းများထွက်စစ်ဆေးပါ။
Marisa Miller (အသက် ၄၁ နှစ်) သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Santa Cruz မှအမေရိကန်မော်ဒယ်နှင့်မင်းသမီးဖြစ်သည်။ သူမသည်အီတလီအေးဂျင့်များကသတိပြုမိခဲ့ပြီး Marissa သည်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေစဉ်တွင်မော်ဒယ်လ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာသူမသည်အီတလီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉ နှစ်သမီးအရွယ်တွင် 'Perfect 10' တွင်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခဲ့သည်။ ကျော်ကြားဓာတ်ပုံဆရာတွေ့ဆုံပြီးနောက် Mario testino သူမဟာဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လာပြီးနာမည်ကြီးမဂ္ဂဇင်းတွေမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က Maxim မဂ္ဂဇင်းကသူမကို“ Sexiest Women 100” စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Marisa သည် Harley Davidson နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ ပူပြင်းတဲ့ဆံပင်ရွှေရောင်မှာ Tommy Hilfiger, Guess, True Religions Jeans နှင့်အခြားသူများ၏မျက်နှာဖြစ်သည်။ သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် Allure မဂ္ဂဇင်းအတွက်အဝတ်မပါဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။
Marisa Miller ကဝတ်လစ်စလစ်နှင့် topless pics
2000 ရဲ့စူပါမော်ဒယ်များ Marisa Miller ကဝတ်လစ်စလစ် pics တစ်ခုတစ်ခုအန္တိမအဝတ်အချည်းစည်းစုဆောင်းမှုအတွက်စုဆောင်း, ဒီမှာပါ! ဤမိန်းမသည်ကြီးစွာသောဗလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏လှပသောမျက်နှာအပြင်အခြားသူမ၌ပြည့်စုံသောသဘာဝပြခန်းများနှင့်ပြည့်စုံသော puffy နို့သီးခေါင်များရှိသည်။ သူမသည်ဤဝတ်လစ်စလစ်များအတွက်လူကြိုက်များခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူမ၏ဆင်းရဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝနားမလည်နိုင်ပါ။ မာရီဆာသည် Jim Miller နှင့်နှစ်နှစ်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူ၏နာမည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ယနေ့သူ၌ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးသူသည်ဂီတထုတ်လုပ်သူ Griffin Guess နှင့်လက်ထပ်သည်။
Marissa ရဲ့ Boob ငါ့ကိုသတိပေးတယ် သူမ၏ပေါက်ကြားဝတ်လစ်စလစ်အပေါ်ကိတ် Upton ရဲ့ကြီးမားတဲ့ tits !
Marisa Miller က sexy မြင်ကွင်းများစုဆောင်းခြင်း
'' R.I.P.D. '
သူမမြေပြင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေပါတယ်စူပါမော်ဒယ် Marisa Miller က, အနိမ့်ဖြတ် beige စားဆင်ယင်အတွက် cleavage အများကြီးဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူမယောက်ျားများကသူမကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်ငေးကြည့်နေသဖြင့်လေမှုတ်စက်တစ်ချောင်းကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
အားကစားပုံဥပမာရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ် Marisa Miller သည်အနက်ရောင်ဘောင်းဘီတိုများ၊ အင်္ကျီတစ်ထည်၊ ထို့နောက်သူမသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှေ့တွင်ဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး ကို ၀ င်ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်သည်လမ်းလျှောက်ထွက်လာပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
megan ရှိ fox ဝတ်လစ်စလစ်ရိုက်ကူး
Emily deyt aysage deyt
Shannon Elizabeth ဝတ်လစ်စလစ်ပါ pic